Izambatho eziqhelekileyo zase-Itali zinika ugqozi oluhle | Iindaba Zokuhamba
Iimpahla eziqhelekileyo zase-Itali
Susana Garcia | | ngokubanzi, Italia
Los Izambatho eziqhelekileyo kwilizwe ngalinye Zikhethwe ngokusekwe kwizithethe, kwimbali kunye namaxesha obuqaqawuli bendawo nganye. Ezi zinxibo ziyinxalenye yenkcubeko yelizwe ngalinye kwaye nangona zingasetyenziswa namhlanje, zisengumfuziselo kubo bonke abemi beli. Isimboli abazisa ngayo kwiziganeko ezikhethekileyo ezinjengeeholide ezibalulekileyo.
I-Itali lilizwe elihle kwaye likhulu ngokwenyani, kungoko ke kunokubakho ukutolika okwahlukileyo ngento i Isinxibo esiqhelekileyo e-Itali. Amasiko kunye nezinxibo ziyatshintsha ukusuka emantla ziye emazantsi ke siya kuzama ukubonisa kancinci le seti yesinxibo ebonakala ngathi iyafana ne-Itali.
1 Ukusetyenziswa kwesinxibo esiqhelekileyo
2 Isinxibo esiqhelekileyo e-Itali
3 Ukuhlaziywa kwe-Renaissance e-Itali
4 Ixesha elidlulileyo laseRoma
5 Iimpahla zeSardinia
6 Imikhosi yaseVenice
Ukusetyenziswa kwesinxibo esiqhelekileyo
Izambatho eziqhelekileyo zikhuthazwa ziinkumbulo zakudala zamaxesha apho amazwe ayephila ixesha lobuqaqawuli. Ezi iisuti zinako Zinazo zonke iintlobo zeempembelelo kwaye enyanisweni iisuti zase-Italiya zigcina ukufana okuthile namaJamani. Ezi zizambatho ezihlala ziphefumlelwe ngamaXesha Aphakathi okanye ngamaxesha apho bekungabikho mpembelelo kwilizwe liphela kwifashoni, ke yonke into yayiqinisekile ngakumbi. Ngokusetyenziswa kwezi zinxibo, zihlala zikhutshwa kwiminyhadala yomdla wengingqi okanye welizwe. Amaxesha apho ummandla ngamnye unemibhiyozo yokukhumbula inkcubeko kunye namasiko, yiyo loo nto isinxibo sibaluleke njengenxalenye yomnyhadala.
Isinxibo esiqhelekileyo e-Itali
Isinxibo esinokuqwalaselwa njengeyona ixhaphakileyo e-Itali siqulathe isondo kunye nepitikoti kunye neapron. Sisinxibo esifanelekileyo esinevesti nehempe emhlophe ngaphezulu. Ukongeza, isigqubuthelo sentloko okanye isigqubuthelo seenwele sixhaphake kakhulu kwimibhiyozo yase-Italiya, akufuneki silibale ukubaluleka kobuKatolika kweli lizwe. Namhlanje ungabona uninzi lwesinxibo esifana nesi, siphefumlelwe ngamaxesha aphakathi, nangona ngokwemiqathango yesinxibo esiqhelekileyo kukho imimandla ebonisa iimpahla ezahluke kakhulu nezikhethekileyo.
Ukuhlaziywa kwe-Renaissance e-Itali
Elinye lamaxesha ahlonitshwayo kwi I-Itali luHlaziyo lwamva, xa kwabakho umzuzu wobungangamsha. Ukongeza, iilokhwe kunye neesuti zeli xesha zinomgangatho wokuba mhle kakhulu kwaye ucacisiwe. Iisuti eziphefumlelwe ngeli xesha zihlala zibiza, kuba sithetha ngeeleyisi kunye neebrokhodo zokwenza iimpahla ezinemaleko kunye neenkcukacha ezininzi. Ezi zinxibo zihlala zisetyenziswa kwiminyhadala enikezelwe kumaXesha Aphakathi kunye nokuhlaziya amaxesha angaphambili. Zikwasetyenziswa ngokubanzi kwimibhiyozo yeCarnival, ngakumbi eVenice.
Ixesha elidlulileyo laseRoma
Wonke umntu uyawazi amaxesha amaRoma kunye nobuhle bawo iisuti ezenziwe ngamalaphu amhlophe. Zizinxibo ezikhoyo namhlanje esele ziyinxalenye yenkcubeko edumileyo kwaye wonke umntu uzisebenzisile ezinje ngesinxibo saseRoma, kodwa akufuneki silibale ukuba ziyinxalenye yenkcubeko kunye nembali yase-Itali. Ke banokuthathwa njengezinye iimpahla eziqhelekileyo eziphefumlelwe bubukhosi baseRoma.
Kwisiqithi saseSardinia baneenkcukacha zenkcubeko ezahlukileyo kwaye kwizinxibo sinokubona enye yazo. Ezi suti zenziwe ngamalaphu amade kwaye abanzi apho kukho izaleko ezininzi. Izithsaba zentloko kunye neekhuselo zisetyenziselwa entloko kunye namalaphu ashinyeneyo kunye neeleyisi, kwizigaba ezininzi ngokunjalo. Kuqhelekile ukubona iimpahla ezimfakamfele zegolide kunye nee-shades ezibomvu okanye eziluhlaza. Ngokubhekisele kubo, ihempe enemikhono emhlophe enxibe ivesti iyafana.
Ibaluleke ngakumbi ngokwe Izambatho eziqhelekileyo ziiVenice zeVenice, Ezidumileyo kwihlabathi liphela. Kule meko, baphefumlelwe ngeempahla ezinqabileyo ze-Renaissance apho bengenzi skimp xa kufikwa ekuboniseni amalaphu obutofotofo kunye neenkcukacha. I-Brocades, isilika kunye ne-satin ziyinxalenye yezi suti zintle. Iziketi zinomthamo omkhulu kunye neepitikoti. Ngaphezulu iibhodi zilungelelanisa ukubonisa isinqe. Iisuti zinokuhonjiswa ngazo zonke iintlobo zeenkcukacha, ukusuka kweleyisi ukuya kwintsiba ezinemibala. Xa kuziwa kwiCarnival, akukho mgaqo wokunxiba olandelwa ngokungqongqo, kuphela kukukhuthaza kweRenaissance okugcwele yonke into. Phezulu kunokwenzeka ukuba ubone izigqubuthelo okanye iminqwazi ebanzi. Kodwa ukuba kukho into ekufuneka ihambisane nezi zinxibo, ziimaski zecarnival, esele zidumile kwihlabathi liphela. Ezi maski zihlala zihambelana nesuti ngokombala kwaye zihlala zihonjiswe ngobuqaqawuli, ipeyinti enemibala kunye nezinye iinkcukacha ezongeza ukunethezeka ngakumbi kwisuti yonke. Kunye nezi zinxibo unokubona ezinye izixhobo, ezinje ngeefeni ezizele ngamaso kunye neentsiba okanye iiglavu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » ngokubanzi » Iimpahla eziqhelekileyo zase-Itali
Yintoni ongayibona eLos Angeles
ICala Turqueta, ikona entle eMenorca